Orinasa mpanome sy mpiaro | Azia Pasifika Vaovao
Introduction Fampidirana momba ny famolavolana vokatra】
Famolavolana rojo roa vita
Famandrihana Sealing Sealing Sealing
Ny seam tsirairay dia nofehezina tamin'ny kasety, ary ny valahana dia ampiharina miaraka amin'ny tarika elastika anatiny, izay manatsara kokoa ny fiarovana ny seam sy ny fahatsaran'ny valizy.
Ny cuff dia mampiasa fantsom-pifandraisana anatiny mba hampivoarana bebe kokoa ny fiarovana sy ny fiarovana.
Famolavolana Placket mihidy
Ny fampiharana afovoany afovoany afovoany dia ahafahana mametraka sy manala mora nefa ny endrika famoronana zipper dia mitondra fiarovana tsara.
Famaranana Hem ambany elastika
Ny tarika elastika anatiny dia ampiharina amin'ny sisiny ambany, miaraka amin'ny saron-kiraro fanampiny, izay manatsara ny fahasalamana sy ny fiarovana.
Introduction Fampidirana vokatra】
Akanjo fiarovana miaro, akanjo fiarovan-tena
Fitaovana: Polypropylene spunbonded PE horonan-tsary mifangaro tsy roa
Ny votoatiny: 100% polyester
Ny tombony: Antibacterial, anti-static, malefaka, tsy fahita anaty rano, mifofotra
1. Ny dingana manontolo sy ny akora akora dia mihatra amin'ny fenitra avo indrindra.
2. Ny lamba, kasety tombo-kase ary ny ziper dia mifanaraka amin'ny fenitra nasionaly.
3. Ny akanjo fiarovan-tena dia vita amin'ny lamba tsy vita amin'ny lamba spunbond PP namboarina miaraka amin'ny sarimihetsika PE. Ny fitaovana dia avo amin'ny tanjaka, malefaka mifandray, mora amin'ny hoditra, mahazo aina tsara ary mahery amin'ny fampisehoana antistatic.
4. Manana fampisehoana anti-infiltration tsara, fahaiza-manao fanivanana avo, fanoherana ny hamandoana ambony, herinaratra ary ny fisondrotry ny rivotra, izay ahafahana miaro ny rano sy ny vovoka.
1.Ny fanjaitra fanjaitra, ny fatorana sy ny famonoana hafanana dia ampiharina amin'ny ampahany mampifandray amin'ny akanjo fiarovana. Hisy tombo-kase ny lavaka stitches. Ny tsipika stitches dia tokony ho 8 ka hatramin'ny 14 stitches isaky ny 3cm. Ny stitches dia nilahatra sy nilahatra tsara. Tsy tokony hisy fantsom-bazaha intsony.Bonded na mafana nasiana tombo-kase dia tokony ho fisaka sy haisy tsy misy fofona rivotra.
2. Tsy tokony ho hita ny mason-ny efitranon'ny akanjo fiarovan-tena, ary tokony hisakanana ny tenany ilay mpanakana zipper.
3. Ny firafitry ny akanjo fiarovan-tena dia tokony hifanaraka, mora apetraka ary esorina ary tsy maintsy masaka ny tonon-taolana.
4. Cuffs elastika sy kitrokely, ary ny elatra vita amin'ny satroka sy ny valahany.
5. Ny akanjo fiarovan-tena dia amin'ny firafitra ankapobeny, izay ahitana fonosana ambony sy pataloha lava.
Manaraka: Isokana gown A
Fiakanjo fiarovana, Fiakanjo fiarovana, Water-Proof Apron, Rano Hdpe aprily amin'ny rano, Tariby endrika-vovoka mihetsiketsika, Akanjo fitsaboana fitsaboana,